यस्तो हुन्छ डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टे, जान्नुहोस् यसरी जोगिन सकिन्छ डेङ्गीबाट | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यस्तो हुन्छ डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टे, जान्नुहोस् यसरी जोगिन सकिन्छ डेङ्गीबाट
भदौ २७ गते, २०७६ - १६:२३
काठमाडौं । अहिले नेपालमा डेङ्गीको प्रकोप निकै फैलिएको छ । डेङ्गीको कारण छोटो समयमा नै धेरै मानिसमा संक्रमण फैलिएपछि सर्वसाधारणमा निकै त्रास बढेको छ । स्वास्थ्य विभागले जनाएअनुसार पछिल्लो साउनदेखि अहिलेसम्म ४ हजारभन्दा बढिमा यसको संक्रमण भेटिएको छ । डेङगीको कारण केहिको ज्यानसमेको गएको पुष्टी भएको छ ।
आज हामी सबै त्रसित बनेको डेङ्गीको प्रकोप र यसबाट सुरक्षित हुने उपायबारे केहि जानकारी दिंदैछौं ।
डेङ्गी जिवाणु भएको लामखुट्टेले मानिसलाई टोक्यो भने त्यो जिवाणु मानिसमा सर्दछ । एडिस एजेप्टाई र ए.ई. अल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेले यसको संक्रमण फैलाउने गर्दछ । यो लामखुट्टे वर्षाको बेला २२ देखि ३४ डिग्रीसम्मको तापक्रममा विकास हुने गर्दछ । यो जातको लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्दछ ।
डेङ्गी लागेको मानिसलाई साधारणतया ज्वरो आउने गर्दछ । आँखाको गेडी र त्यसको पछाडि टाउको दुख्ने लक्षण देखा पर्दछ । शरिरमा राता बिबिरा आउने र जोर्नीहरु दुख्ने समस्या पनि पर्छ । संक्रमित मानिसलाई खानामा अरुची हुने र पेटमा गढबढी हुने समस्या देखिन्छ ।
यसरी सर्छ डेङ्गी
डेङ्गी मानिसबाट मानिसमा सर्दैन् । डेङ्गी सार्ने एक किसिमको लामखुट्टे छ । एडिस एजेप्टाई र ए.ई. अल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेले डेङ्गी लागेको बिरामीलाई टोक्यो भने त्यो जिवाणु आफुसँगै लैजान्छ र त्यहि लामखुट्टे अर्को मानिसलाई टोक्दा त्यो जिवाणु पनि सारिदिन्छ ।
यसको कुनै पनि औषधी छैन् । शरीररको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताबाट नै यो रोग निको हुन्छ । एक प्रतिशतभन्दा कम बिरामीमा यो रोगका कारण रक्तश्राव भएर मृत्यु हुने पनि सम्भावना हुन्छ ।
व्यक्तिलाई ज्वरो आयो र हाटखुट्टा दुख्यो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वास्थ्य परिक्षण गराउन आवश्यक हुन्छ । अहिले डेङ्गीको प्रकोप बढेको कारण ज्वरो पनि त्यसैको कारणले आएको हुनसक्छ ।
घर वरिपरि सफा राख्ने र पानी जम्न नदिने उपाय यसबाट बच्ने उपाय पनि हो । डेङ्गीको जिवाणु फैलाउने लामखुट्टे ८० मिटरसम्मको उचाईमा उडेर जान सक्ने भएको हुनाले छरछिमेकको वरिपरि फोहोर छ भने पनि हामी खतरामा पर्न सक्छौं ।
भदौ २७ गते, २०७६ - १६:२३ मा प्रकाशित